एजेन्सी । धेरै विद्यार्थीहरुको मनमा ग्य्राजुएट गरेपछि पढु कि नपढु भन्ने दुविधा हुन्छ । यो विषय पढौं कि त्यो विषय पढौं भन्ने प्रश्न पनि धेरै ग्य्राजुएटहरुको दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ । विस्तृतमा
एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले रच्यो इतिहास, पहिलोपटक आममानिसलाई अन्तरिक्षमा पठायो
बोक्सी भन्दै महिलामाथि कुटपिट, एक जना पक्राउ
अमेरिकामा कोरोना संक्रमणका कारण एकैदिन २२७ं० जनाको मृत्यु
ब्राजिलमा जहाज दुर्घटना, एकै परिवारका पाँचसहित सात जनाको मृत्यु
यी हुन् सबैभन्दा मुश्किल र कठिन जागिर
एजेन्सी । विश्वमा कतिपय यस्ता जागिरहरु हुन्छन् जुन अति नै डरलाग्दा र कठिन हुन्छन् ।
यदी तेस्रो विश्वयुद्ध भएमा कुन कुन राष्ट्रहरु सुरक्षित रहनेछन् ?
सिरिया सरकारले रसायन ग्याँसको प्रयोग गरी आक्रमण गरेपछि विश्वभर खैलाबैला नै मच्चिएको थियो । सिरिया सरकारमाथि भएको आक्रमणपछि कतै तेस्रो विश्वयुद्ध हुने त होइन भन्ने शंका धेरै नै उब्जेको थियो ।
सजिल्यै धनवान् हुन्छन् हत्केलामा यस्ताे चिन्ह हुनेहरु
जब मुकेश अम्बानीकी छोरीले ९० करोडको कपडा लगाइन्
एजेन्सी । धीरुभाई अम्बानीका जेठा छोरा मुकेश अम्बानी अलिबाबाको संस्थापक भएपछि उनी एशियामै सबैभन्दा धनि व्यक्तिको सूचिमा परे । उनी र उनका परिवारका सदस्य तथा उनको महल प्रायः चर्चामा आइरहन्छ ।
यदी तेस्रो विश्वयुद्ध भएमा यी १० देश प्रमुख कारण हुने
२० औं शताब्दिमा विश्वले दुईवटा विश्वयुद्ध देख्यो । ति विश्वयुद्धका कारण ठूलो धनजनको क्षति भयो । युद्धले थलिएका राष्ट्रहरुले युद्धपछि विकासको बाटो रोजे ।
परमाणु हतियारले पनि ध्वस्त पार्न नसक्ने घरहरु
अब तपाई नै भन्नुहोस्, यी व्यक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा भाग्यमानी व्यक्ति को ?
क्रोयसियाका संगित शिक्षक फ्रेन सेलकले मृत्युलाई ७ पटक जित्न सफल भए । सबैभन्दा पहिले उनी रेल दुर्घटनामा बाँचे । त्यसपछि विमान दुर्घटनामा, बसले ठक्कर दिँदार उनी चढेको बस पुलबाट खस्दा समेत बाँचे र पछीदुईवटा कार दुर्घटनामा समेत बाँचे । यतिमात्र होइन उनले सन् २००२ माक्रोयसियन चिठ्ठामा एकलाख डलर समेत जिते ।
कस्ता कपाल हुने महिलाको स्वाभाव कस्तो ?
एजेन्सी । कपालको सौन्दर्यता केवल आर्कषकको लागि मात्रै हुँदैन्, त्यसले तपाईंको व्यक्तित्व पनि झल्काउँछ । कपाल व्यक्तित्वको मानक पनि हो ।